Ọnụ ọgụgụ ntụgharị ntụgharị: Ntuziaka 9-Nzọụkwụ Iji Nwee Conba Ọnụego Ntughari | Martech Zone
Dị ka ndị ahịa, anyị na-etinye oge na-ewepụta mkpọsa ọhụụ, mana anyị anaghị arụ ọrụ dị mma mgbe niile na-ele anya n'enyo na-anwa iji bulie mgbasa ozi na usoro anyị ugbu a. Fọdụ n'ime ihe ndị a nwere ike bụrụ na ọ karịrị akarị… olee ebe ị ga-ebido? Enwere usoro maka njikarịcha ntụgharị ntụgharị (CRO)? Ee ee… enwere.
Otu na Ntughari Ndi okacha amara nwere usoro CRE nke ha ha na-ekere òkè na ya ihe omuma a ha jikọtara ọnụ na ndị otu na KISSmetrics. Ihe omuma ihe omuma ihe 9 ka nma igbanwe onu ogugu.
Nzọụkwụ iji bulie ọnụego mgbanwe
Kpebisie ike na iwu nke egwuregwu ahụ - zụlite gị Atụmatụ CRO, ihe mgbaru ọsọ ga-ewe oge, na otu ị ga-esi amata ihe ịga nke ọma. Malite na ndị ọbịa gị n'uche ma jee ije na usoro ọ bụla ha ga-emerịrị iji gbanwee onye ahịa. Emela echiche!
Ghọta Na Akụ Isi Okporo fficzọ - ịzụlite a nnụnụ-anya n'ọnọdụ gị dijitalụ Njirimara na iji anya nke uche gị ụlọ nkwonkwo ahịa, ebe ndị ọbịa na-abịa, peeji ọdịda nke ha rutere, na otu ha si agagharị na saịtị gị. Chọpụta akụkụ ndị nwere ohere kachasị dịwanye mma.
Ghọta ndị ọbịa gị (ọkachasị ndị anaghị agbanwe agbanwe) - Achọpụtaghị - chọpụta ihe kpatara ndị ọbịa gị anaghị agbanwe site na ịghọta ụdị ebumnuche na ebumnuche dị iche iche, ịkọwapụta ahụmịhe onye ọrụ, yana ịchịkọta na ịghọta nghọta ndị ọbịa.
Mụọ Ahịa Gị - Mụọ ndị asọmpi gị, ndị asọmpi gị, ọkachamara ụlọ ọrụ, yana ihe ndị ahịa gị na-ekwu na soshal midia na saịtị nyocha. Mgbe ahụ, chọpụta ohere iji melite ọnọdụ gị site na ịmebe isi ike nke ụlọ ọrụ gị.
Kpughee akụ zoro ezo na azụmaahịa gị - Chọpụta akụkụ nke ụlọ ọrụ gị bụ nke kachasị kwenye ndị ahịa nwere ike, chee akụ ndị ahụ n'oge kwesịrị ekwesị na usoro ịzụrụ, tinye oge itinye ego, ịchịkọta na igosipụta akụ ndị ahụ.
Mepụta gị ibuo Strategy - Were echiche niile ị mepụtara site na nyocha gị ma bute ndị buru ibu, ndị nwere obi ike, ndị ezubere iche nke ga-eto azụmaahịa gị n'oge kachasị anya. Mgbanwe ndị siri ike na-eme ka ị nwekwuo uru, ị ga-enwetakwa nnukwu nloghachi.
Chepụta peeji nnwale gị - Imewe na waya waya nke ahụmịhe ọhụụ nke ndị ọrụ na-ekwenyekwu, nkwenye, na enyi na enyi. Mee ọtụtụ nyocha nke ojiji na waya waya ma soro ha kwurịtara onye ọ bụla nwere nghọta dị omimi banyere ndị ahịa gị.
Mepụta nnwale na weebụsaịtị gị - Mee nyocha A / B na nyocha gị. Soro usoro nke na-eme ka ndị otu niile ghọta ihe ule ahụ bụ, ihe kpatara ị ji agba ya, otu o si daba na saịtị ahụ, otu o si kwekọọ na ebumnuche azụmaahịa, yana otu ị ga-esi wee tụọ ọganiihu. A / B ule ngwanrọ nwere ike gbakọọ, yana ọnụ ọgụgụ ziri ezi, nke mbipute na-ewepụtakwu ntụgharị.
Nyefee Mgbasa Ozi Mmeri Gị na Media Ndị Ọzọ - Chọpụta otu esi etinye nghọta sitere na nnwale mmeri gị na akụkụ ndị ọzọ nke ụlọ ahịa gị! Enwere ike ịkekọrịta akụkọ, ntanetịime ntanetị nwere ike ịmegharị maka mgbasa ozi na-adịghị n'ịntanetị, ma gbasaa okwu ahụ na ndị mmekọ gị ka ha nwee ike ịkwalite mkpọsa ha.
Kissmetrics na-enyere ndị na-ere ahịa aka ịrụ ọrụ akpaaka ndị ahịa (CEA) site n'inyere ha aka nyocha, nkewa, ma tinye ha niile n'otu ebe na akụkọ dị mfe ọgụgụ na njirimara onye ọrụ enyi.
Rịọ Kissmetrics Demo
Tags: njikarịcha ntụgharịndị ọkachamara ọnụego mgbanwentụgharị mgbanwe njikarịchantụgharị mgbanwe njikarịcha usorontụgharị mgbanwe njikarịcha atụmatụụkpụrụ ụkpụrụcroatụmatụ aghụghọUdogbe
Apr 17, 2021 na 3: 23 AM
Akwa post! Ntuziaka usoro itoolu dị n'elu kwesịrị inye gị ntọala iji mepụta ihe ọ bụla nke ibe ọdịda, na-eduga n'ịgbanwe ntụgharị